Wararka Suuqa Kala Iibsiga Maanta: Manchester United Oo Cadeesay Bartilmaameedkeeda Ugu Horeeya Ee Suuqa, Real Madrid Oo Heshay Badalka Haaland, Iyo Qodobo Kale
HomeWararka WargeysyadaWararka Suuqa kala iibsiga Maanta: Manchester United oo Cadeesay Bartilmaameedkeeda ugu Horeeya ee Suuqa, Real Madrid oo heshay Badalka Haaland, Iyo Qodobo kale
September 9, 2021 Wararka Wargeysyada, Suuqa kala iibsiga, Wararka Ciyaaraha 0
Paris St-Germain ayaa xiiseyneysa 28 jirka daafaca uga ciyaara Jarmalka Antonio Rudiger, kaasoo qandaraaskiisa Chelsea uu uga harsan yahay wax ka yar hal sano . (Le10Sport)
Manchester United ayaa u aqoonsatay xiddiga West Ham ee reer England Declan Rice, oo 22 jir ah bartilmaameedka koowaad ee qadka dhexe suuqa xagaaga soo aadan. (Manchester Evening News)
Real Madrid ayaa bartilmaameedsan doonta weeraryahanka Bayern Munich iyo Poland Robert Lewandowski, oo 33 jir ah, haddii ay ku guuldarreystaan ​​saxiixa 21 jirka reer Norway Erling Braut Haaland oo ka tirsan Borussia Dortmund xagaaga dambe. (AS)
Si kastaba ha ahaatee, kooxda ka dhisan La Liga ayaa lagu soo waramayaa inay heshiis afka ah la gaartay Dortmund si ay Haaland ugu wareejiso xagaaga soo aadan. (Express)
Real Madrid iyo tiro ka mid ah kooxaha ugu sarreeya Premier League ayaa si dhow ula socda Fabio Carvalho oo ka tirsan Fulham , oo 19 jir ah. (Dailymail)
Borussia Dortmund ayaa heshiis cusub la gashay ciyaaryahanka khadka dhexe ee reer England Jude Bellingham mana qorsheyneyso inay iibiso 18 jirkaan xagaaga soo aadan, inkastoo ay xiiseynayaan kooxaha Premier League. (90Min)
Lionel Messi ayaa ku adkeystay in qandaraaskiisa Paris St-Germain uu ku jiro qodob dhigaya in 34 jirkaan uu waajibaadka caalamiga ah ka saaran yahay Argentina ka hor inta uusan u ciyaarin kooxda Ligue 1 ka hor Koobka Adduunka ee sannadka dambe lagu qaban doono Qatar. (Sport)
Barcelona ayaa ku qasbanaan doonta inay siiso Liverpool 20m euros (£ 17.1m) oo gunno ah haddii kubadsameeyaha reer Brazil Philippe Coutinho uu in ka badan 100 kulan u saftay kooxda ka dhisan La Liga. 29 jirkaan ayaa 90 kulan u ciyaaray Barca tan iyo markii uu kaga soo biiray Reds bishii Janaayo 2018. (Sport)
Manchester City ayaa isha ku heysa daafaca AC Milan iyo xulka France Theo Hernandez, maadaama 23 jirkaan uu kooxda Pep Guardiola siin karo dooqyo badan oo dhanka bidix ah. (Manchester Evening News)
Timo Werner ayaa saxaafada Jarmalku aad u hadal haysaa inuu ku laaban doono dalkiisa iyadoo 25-jirka weerarka uga ciyaara Chelsea lala xiriirinayo inuu u dhaqaaqayo Bayern Munich , halkaas oo uu kula xiriiri lahaa tababarihiisii ​​hore ee RB Leipzig Julian Nagelsmann. (Sport1, Mirror)
Franck Kessie ayaa laga yaabaa inuu ka tago AC Milan bisha Janaayo ka dib markii ciyaaryahanka khadka dhexe ee reer Ivory Coast, oo 24 jir ah, uu diiday dalabkii ugu dambeeyay ee kooxda Serie A ee u dhiganta 6.5m euro (£ 5.9m) sanadkii. (Tuttosport )
Liverpool ayaa ka mid ah kooxaha xiiseynaya Kessie, in kasta oo Milan laga yaabo inay raadsato heshiis is -dhaafsi, iyadoo ciyaaryahanka khadka dhexe ee reer Spain Thiago Alcantara, oo 30 jir ah, uu u wareegi doono San Siro. (Il Milanista)
Donny van de Beek ayaa ogolaaday heshiis amaah ah oo uu ugu biirayo Everton suuqii xagaaga laakiin Manchester United ayaa hor istaagtay bixitaanka 24 jirka reer Holland. (Express)
Xiddiga Tottenham Ryan Sessegnon ayaa laga yaabaa inuu amaah kale ku baxo iyadoo 21 jirka reer England ee 21 jirada ah amaah loogu diri doono kooxda Turkiga ee Fenerbahce . (CNN Turk – af Turki)
Daaficii hore ee Arsenal David Luiz oo 34 jir ah ayaa isha ku haya inuu ku laabto dalkiisa Brazil ka dib markii uu iska diiday xiisihii Marseille . (Le10Sport – af Faransiis)
Ciyaaryahanka kale ee hore ugu soo ciyaaray Arsenal , Mesut Ozil, ayaa xiiso ka helaya kooxaha ka dhisan MLS iyo Qatar iyadoo ciyaaryahanka khadka dhexe ee reer Jarmal, fashilmay